ကျွန်တော်တို့ဟာ UNI ဝန်ခံမှုစာမျက်နှာများကိုအဆင့်သတ်မှတ်ခဲ့ပြီး၊ ဘယ်နိုင်ငံ UNI ဟာအမှန်တကယ်တိုင်းပြည်မှာအကောင်းဆုံးလဲဆိုတာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည် - သတင်း
ကျွန်တော်တို့ဟာ uni ဝန်ခံမှုစာမျက်နှာများကိုအဆင့်သတ်မှတ်ခဲ့ပြီး၊ ဘယ်နိုင်ငံ uni ဟာအမှန်တကယ်တိုင်းပြည်မှာအကောင်းဆုံးလဲဆိုတာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်
STD ၏ထိတ်လန့်ဖွယ်ကောင်းသောဇာတ်လမ်းများမှသည်အမုန်းတရားများကိုဖုံးအုပ်ထားသည့်အထိ၊ နှိမ့်ချစွာအသိအမှတ်ပြုခြင်းခံရသောစာမျက်နှာသည်အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်အံ့သြဖွယ်ရာများနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ အဘယ်သူသည်သူတို့ housemate ရဲ့အိပ်ရာထဲမှာ shagging စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ စောင့်ရှောက်သည် KETTLE မှာသူတို့ရဲ့ဥပြုတ်?
ဂါးဒီးယန်း၏လိဂ်ဇယားအဆင့်ကိုမေ့လိုက်ပါက၎င်းသည်သင်သိထားသင့်သမျှကိုပြောပြလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မည်သည့် uni တွင်အရည်ရွှမ်းဖွယ်ကောင်းသောအတင်းအဖျင်းပြောဆိုမှုများကိုကြည့်ရှုလိုသနည်း၊ ထို့ကြောင့်စစ်မှန်သောဝန်ခံခြင်းစာမျက်နှာပုံစံတွင်ဗြိတိန်နိုင်ငံ၏အကြီးမားဆုံးတက္ကသိုလ်များကိုသင်အဆင့်အတန်းနိမ့်ကျသောလျှို့ဝှက်ချက်များကိုရှာဖွေရန်သင့်ကျေနပ်ဖွယ်အစီအစဉ်တွင်ရှာမတွေ့ပါ။
ဘုရားသခင့်အဆင့်ဆင့် - LeedsFess
Ah LeedsFess၊ မင်းမှာအဲဒါအားလုံးရှိတယ်။ uni swim အဖွဲ့ဝန်းကျင်ရှိကဗျာဆန်သော #clapgate မှစာကြည့်တိုက်အိမ်သာရှိ serial masturbator အဖြစ်အပျက်အထိသင်၏ ၀ န်ခံချက်သည်သင်၏တိုင်တိုင်ကိုရထိုက်သည်။
ဒါ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ကိုဒီ Tarantino လက်စားချေခံထိုက်သောပုံပြင်နှင့်ဘီလ်ကို Kill အား 2019 ရဲ့အဖြေကိုဝယ်ယူခဲ့သည်ကိုလည်းမမေ့ပါနှင့် -
ထိပ်တန်းအဆင့် - Newfess
အဆိုပါ Geordies ၏မြေယာအမြဲကောင်းသော banter ထုတ်လုပ်သွားခဲ့သည်နှင့် Newfess ဆက်ဆက်စိတ်ပျက်ပါဘူး။ ဤစာမျက်နှာတွင် Greggs နှင့်အလွန်ရိုးရိုးသားသားရိုးသားဖြောင့်မတ်စွာ ၀ င်ရောက်လာခြင်းကိုနှစ်သက်ခြင်းနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ သို့သော် Toon တွင်ပျမ်းမျှညတစ်ညတည်းမဟုတ်ပေလော။
ကောင်းမွန်သော Tier: Sheffessions
ခိုတစ်ကောင်မွေးရန်နီးကပ်သော uni စာကြည့်တိုက်ကိုမြင်သောမြို့တစ်မြို့၌ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးများစာမျက်နှာရှိပါသလား။ Sheffessions ၏ Uni နှင့် Hallam နှစ်ခုလုံးရှိ Sheffessions သည်အလွန်ဆိုးရွားလှသည့်ကျောင်းသားလှောင်ပြောင်သရော်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ အမှန်တကယ်မျက်စိပွင့်လင်းသောပို့စ်များကိုပေးသည်။
ဤ post သည်မြို့၏တေးရေးအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သောပါဝင်မှုအပေါ်အလင်းပေးသည်။
ဒီတစ်ခုက EastEnders Christmas အထူးထက်ပိုပြီးထိတ်လန့်စရာဖြစ်စေနိုင်တဲ့နောက်ထပ်ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ့်တစ်ဦး tinder အကောင့်ပါဘူး
အလယ်အလတ်အဆင့် - Bristruths
Bristol Uni သည်အချိန်ကုန်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကျော်ကြားမှုနှင့်စပ်လျဉ်း။ ဝါကြွားလိုသော်လည်း၊ Ribena ကို BRISTOL တွင်တီထွင်ခဲ့သည်ကိုသင်သိပါသလား။ David Walliams နှင့် Matt Lucas တို့သည် BRISTOL သို့ရောက်ကြောင်းသင်သိပါသလား။ - ၀ မ်းနည်းဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်၎င်းဝန်ခံမှုစာမျက်နှာကိုထိုကဲ့သို့သောအောင်မြင်မှုများသို့ထပ်ထည့်။ မရပါ။
သို့သော်ဂုဏ်ယူမှုသည် Bristruths နှင့်အလွန်ဝေးကွာသည်။
သို့သော်၎င်းသည် ၀ င်ခွင့်အချို့ကိုပြန်လည်ရယူထားသည်။ အောက်ဖော်ပြပါ post သည်နိုင်ငံရေးနှင့်အထူးသဖြင့်အပြန်အလှန်သီးသန့်ဖြစ်ရန်မလိုပါ။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ Brexit ဟာငါတို့အားလုံးနောက်ကွယ်မှာရနိုင်သည်
Boris ဂျွန်ဆင်၊ Theresa မေနှင့် David Cameron တို့နှင့် Oxford ကျောင်းသားဟောင်းများနှင့်အတူ ၀ န်ခံရန်စာမျက်နှာအတွက်မျှော်လင့်ချက်တစ်ခုအမြဲရှိခဲ့ပါသလား။ အဘယ်သူသည်ဂျုံလယ်ကွင်းမှတဆင့်ပြေးအကြောင်းကိုဖတ်ချင်တယ်?
Oxfess သည်ကြီးလေးသောပညာရေးဆိုင်ရာဟောပြောချက်နှင့်လက်တင်နှင့်စာပေများကိုမကြာခဏဆွေးနွေးခြင်းတို့အတွက် 'ထင်ရှားသည်' ဖြစ်သည်။
အောက်စ်ဖို့ဒ်နှင့်ကင်းဘရစ်ပြိုင်ဆိုင်မှုသည်ဒဏ္legာရီဆန်သော်လည်း၊ Camfess သည်အထက်လူလတ်တန်းစားစိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်းမှအထက်၊ လူလတ်ပိုင်းအထက်အတန်းအစားများပိုမိုကွဲပြားခြင်းအထိရှိသည်။
အဘယ်သူမျှဝန်ခံဒီကြေကွဲဖွယ်ဝန်ခံချက်ထက်အကောင်းဆုံး epitomize နိုင်ဘူး:
အံ့အားသင့်စရာအကောင်းဆုံးအချက်မှာသူတို့ Waitrose မှလွဲ၍ အခြားစူပါမားကက်များရှိသည်ကိုသူတို့သိခြင်းဖြစ်သည်
ကျွန်ုပ်တို့၏ကျယ်ပြန့်သောနှင့်သိပ္ပံနည်းကျသုတေသနပြုချက်အရရဲရင့်သော ၀ င်ရောက်မှုများသည်မြောက်နှင့်တောင်ကွဲပြားမှုရှိပုံရသည်။
Leeds နှင့်နယူးကာဆယ်မြောက်ပိုင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံများကသူတို့၏လှောင်ပြောင်သရော်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိပါသလား။ သို့မဟုတ် Oxbridge ကျောင်းသားများသည်သူတို့၏စာအုပ်များကိုချ ထား၍ သူတို့၏စက်ရုံအိုးများအတွက်ပိုမိုဆန်းသစ်သောအသုံးပြုမှုကိုစတင်ရှာဖွေရန်အချိန်တန်ပြီလော။